Global Voices teny Malagasy » Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Annie Zaman · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Annie Zaman
Voadika ny 14 Marsa 2017 16:33 GMT 1	 · Mpanoratra Qurratulain (Annie) Zaman Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Candy
Arahaba, izaho no Qurratulain Zaman izay fantatry ny maro amin'ny hoe Annie, ary ho an'ny sasany dia renin'i Mimi’(Um-e-Umaima). Raisiko ho voninahitra ho ahy ny nanendrena ahy ho kandidà hisolo tena ity vondrom-piarahamonina tsara, marolafy sy maroloko ity, izay antsoiko hoe fianakaviana. Mbola misaotra ihany, tsapako ho tena feno fietrena tanteraka aho ! Any Londona aho no monina, saingy amin'izao fotoana aloha dia miaina aty Birmania izay somary lafo sy mihisatra ny aterineto, ka nahatonga ny fahataran'ny fametrahako ny firotsahana ho fidina tao amin'ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina.
Hatramin'ny lohataonan'ny 2011 aho no efa mpirotsaka an-tsitrapo tato amin'ny GV, fony aho niverina avy any Pakistàna nankao Alemaina, rehefa niasa ho an'ny radio Deutsche Welle, ny Oniversiten'i Bonn (departemantan'ny Indolozia) sy ny GIZ. Iray tamin'ireo profesora nampianatra ahy tao amin'ny Akademian'ny Deutsche Welle no nampahafantatra ahy ny fisian'ny GV, izay natolony ho toy ny fanadihadiana tranga iray mitondra fampitàna vaovao azo isafidianana ho an'ireo faritra lavitra ary orinasa tsy misahana varotra. Tsy misahana varotra no sady mampita vaovao ho an'ny faritra Atsimo amin'izao tontolo izao: natao ho ahy izany !!!
Tamin'io fotoana io manokana, izay nandoarako lanitra sy tany hahitana izay fomba hahafahako mipetraka tsara indray tao Azia, ary nahaketraka ahy sy nahavery fanantenana ahy nahita hoe lasa ny ‘scoop’ mandrakariva no atao hoe vaovao fa tsy ny fampahalalàna…, vavahady iray ny GV nahafahako nijoro tsara, nanao izay hitahirizako ny fitiavako manokana ny olona, ny vondrom-piarahamonina, ary ny vaovao momba azy ireo.
Selfie niarahan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny GV Azia Atsimo. Sary natolotr'i Subhashish Panigrahi am-pitiavana.
Nanomboka teo ny GV dia loharanom-pahalalàna hatrany, loharanom-baovao ary sehatra iray nampitombo tsy mitsahatra ny fahaizako momba ny asa fanaovana gazety. Ho ahy, toy ireo maro hafa izay nifandraisako nandritry ny taona maro, ny GV dia nofy nanjary tena izy nanome feo ireo tsy mba re. Ho an'ireo vondrom-piarahamonina, ary indrindra fa ireo faritra any Atsimo. Betsaka ireo faritra sy olona tsy mba hita anaty lohateny vaventy, na mahazo andalana tokana monja any anaty media.
Matetika ny fahasambarana dia tsy misy endrika na loko – fa dia azo atao fotsiny ny mahatsapa azy. Sary natolotr'i Jeremy Clarke am-pitiavana
Teo anilan'ny fivoarako sy ny fahasambarako tamin'ny asa an-gazety, ny dia teo anilako mandrakariva ny fianakaviana GV. Tamin'ny 2014, raha niteraka an'i Mimi, zanako voalohany aho, nandalo ny vanim-potoana manaraka ny fiterahana aho (postpartum), ary minoa ahy ianareo, nanampy ahy ianareo rehetra … tamin'ireo imailaka avy aminareo izay betsaka, tao anatin'ny fandaharam-potoana feno dia feno, no latsaka tany anatin'ny sokajy “spams” na “imailaka tafahoatra tao anatin'ny boaty fandraisako hafatra”—izaho, nitazona ahy ho tsy tapaka fifandraisana tamin'ny tontolo ivelany sy hilamin-tsaina izany. Azoko antoka fa nitazona ny maro amintsika hilamin-tsaina sy ho olombelona tamin'ny fomba marobe samihafa izany, izay tsy misy teny mahalaza azy. Nandritra io fotoana io aho dia nandray anjara tato amin'ny GV toy ny mpanoratra ho an'i Azia Atsimo sy toy ny mpandika lahatsoratra ary mpiaraka mamoaka lahatsoratra miasa an-tsitrapo ho an'ny fiteny Ourdou. Nanam-bintana ihany koa aho nanatrika ny Vovonana GV 2015  tao Filipina niaraka tamin'ny zanako 10 volana. Hitako tany indray ireo izay efa tafahaona tamiko nandritry ny Vovonana GV 2012  tany Nairobi, ary dia nahazo namana marobe vaovao aho. Hafa tanteraka mihitsy izany mihaona mivantana amin'ny tsirairay izany, ary angovo miabo sy fitiavana no nentiko nody tany an-tranoko.
Tampoka teo, nahazo namana maro niarahana nilalao aho 🙂 Sary natolotr'i Arzu Geybullayeva am-pitiavana
Maninona no hisolo tena ireo mpirotsaka an-tsitrapo :
Nahoana ? Fanontaniana iray matetika apetrako amin'ny tenako io, nahoana no mangataka ny vatonareo mba ho voafidy ho solotenan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo? Betsaka ny mpiasa an-tsitrapo mahafinaritra mirotsaka ho amin'io toerana io—koa nahoana no ho izaho? Taorian'ny resaka lavabe nataoko ho an'ny tenako ihany, dia izao no tsoakevitro :
Tsapako ho akaiky ireo mpirotsaka an-tsitrapo miasa ato amin'ny GV aho mba hianatra sy hanadino izay efa hay momba ny taokanton'ny fitantaràna. Takatro ny hasarotana rehetra sy ny fahafinaretan'ny fanangonana vaovao, ny fametrahana azy ho an-tserasera ary ny fandefasana azy ho any amin'ny mpanonta ary avy eo ny miaraka miasa amin'ny tarika mpiandraikitra ny fanoratana.
Ankehitriny aho miaraka miasa amin'ny Rory Peck Trust  izay manohana ireo mpanao gazety miasa tena sy ny fianakaviany manerana izao tontolo izao. Ny fandaharanasa Azia  no sahaniko ao. Satria ny ankamaroan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao anatin'io vondrom-piarahamonina io dia tsy miankina, mitondra traikefa sy fahafahana ho ahy hanampy ny vondrom-piarahamonina amin'ny fomba misy famoronana kokoa ny asako.
Ananako ny fotoana sy ny angovo hamaly babena ity vondrom-piarahamonina ity.
Haiko tsara ny mihaino ary ananako ny traikefa hisahanako am-pitandremana fatratra ireo olona mandalo sedra mafy. Amin'ny maha-solotenan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo, ho azoko henoina ny hetahetanareo ary ho entiko eo anivon'ny filankevitra mba hanetsehana fanovàna. Takatro fa mila ihany koa tohana bebe kokoa ireo mpiasa an-tsitrapo ato amin'ny GV, mila fanohanana, fampaherezana ho an'ireo fandraisana anjarany amin'ny fitondrana tantara mahafinaritra avy amin'izao tontolo izao.
Ho entiko ho an'ny Filankevitry ny GV ny firehetampoko hiasa miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina, indrindra fa ny vondrom-piarahamonina GV izay anànako fifamatorana akaiky manokana. Nipetraka sy niasa taminà tanibe roa aho, niasa teny an-kianja ary koa tany anaty efitrano fanoratana tao Azia sy Eoropa. Mpanao gazety fahiny, haikohaiko ihany ny zavamisy ao amin'ny efitrano fanoratana sy ny fidinana an-kianja *kaay maharary ilay milaza ny tenako hoe mpanao gazety fahiny !. Niaina ary nitantana ny rarintsaina iainana ao amin'ny sekretarian'ny asa fanaovana gazety aho, ary fantatro koa ny hazondamosina ijoroan'ny gazety rehetra, dia ny mpanangona vaovao, ilay manoratra …na dia tsy mena-mitaha aza manao izay ho afany amin'ny teny iraisampirenena toy ny anglisy. Miteny tenimpirenena 5 aho ary tia mihira sy mandihy rehefa tsy fotoana hikarakarako nahandro na hivezivezeko mitety tany.
Vondron'ny Global Voices nalaina sary tsy nampiasàna drona ! (Sary : Jeremy Clark)
Tiako ny hisolo tena ny tsirairay aminareo izay manome ny fotoanany sy ny angovony ho an'ity toerana mahafinaritra ity. Ianareo no manome hery anay ary ilaina ny mahita fomba ifaneraserana mismisy kokoa sy misy famoronana bebe kokoa, miaraka amin'ireo tarika mpitantana, mba hananantsika faharisihana hatrany, ary hitazonana ity sehatra ity ho toerana iray fanaovana hetsika ho antsika rehetra, maharitra ary an-tsitrapo.
Misaotra amin'ny fanohananareo sy ny fitiavanareo! Azonareo atao ny mifandray amiko amin'ny annie.xaman@gmail.com . Ezahako ny hamaly haingana araka izay azoko atao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/14/96747/
 Vovonana GV 2015: https://summit2015.globalvoices.org
 Vovonana GV 2012: https://summit2012.globalvoices.org